Banaanbax Ka Dhan ah Mahdi Gulleed oo laga Abaabulaayo Magaalada Muqdisho
HomeWararka MaantaBanaanbax Ka Dhan ah Mahdi Gulleed oo laga Abaabulaayo Magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda abaabulka banaan bax ka dhan ah Ra’isul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed, waxaana banaan baxa dhigaya oo abaabulkiisa wada dad kasoo jeeda Somaliland oo degan Muqdisho.
Dadka abaabulaya banaan baxa ayaa sheegay in ay uga soo horjeedaan faragelinta qaawan uu doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ku hayo Ra’isul wasaare kuxigeenka dalka.
Guddoomiyaha Dallada Midnimo , Sakariye Nuur Saajin, oo banaan baxa abaabulaya ayaa sheegay in Mahdi Guuleed uu kahor taagan yahay xuquuqda ay ku leeyihiin Dowladda Federaalka si ay u helaan, sidoo kale uu faragelin ku hayo Doorashada Gobollada Waqooyi.
Dallada abaabuleysa banaan baxa ka dhanka ah Mahdi Guuleed ayaa warqad fasax ah ay ku dalbanayaan in banaan baxa qabsadaan waxa ay u direen wasaaradda amniga gudaha oo laga sugayo in ay fasaxdo banaan baxan ama joojiso.
‘’Banaanbaxa aan dalbanay waxa aan uga soo hor jeednaa Raysul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo u adeegaya ninka 1-sano iska fadhiya Villa Soomaaliya sharciyad la’aanta, mana jirto cid naga hor istaagi karta waayo waxa aan fasax ka heysanaa Wasaaradda Amniga oo aan ku wargelinayay in dibadbaxeenu uu yahay mid nabadeed oo aan ku muujineyno xuquuqdeena & Dareenkeena’’ ayuu yiri Sakariye Saajin .
Ra’isul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed oo doorasho muran badan dhalisay kusoo baxay kagana mid noqday golaha shacabka ayaa hada saameyn badan ku leh xubnaha ku matalaya golaha shacabka ee gobolada Waqooyi.
15 Janaayo oo Ku Beegan Maantay ayaa Lafilayaa in jadwalka Doorashada 241 Toos u Dhaqan Galo Taas oo ay Ku Heshiiyeen Golaha Wadarashi Qaran